नजिक न्युज | कोरोनाकालमा धितो लिलामी, २ हजार ऋणी कालोसूचीमा
काठमाडौं : पाल्पा स्थायी घर भएका एक व्यवसायी दसैँअघि हातमा पत्र बोकेर नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग पुगे । लकडाउनमा ऋणको किस्ता बुझाउन नसकेको र २ महिनाअघि केही रकम बुझाउँदा समेत एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो घर नै लिलामी गर्न लागेको भन्दै उनी गुनासो लिएर राष्ट्र बैंक पुगेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०४६/०४७ देखि निरन्तर रुपमा हरेक वर्ष ऋण नतिर्ने र कालोसूचीमा पर्नेको संख्या बढेको छ । आव ०७३/७४ भन्दा ०७४/७५ मा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २११ प्रतिशतले बढेको कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईबी) ले जनाएको छ ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अलि पुराना ऋण उठाउन बैंकहरुले लकडाउनकै बेला धितो लिलामी गरेको हुनसक्ने बताउँछन् । लामो समयसम्म कर्जा नतिरेकाहरुबाट धितो लिलामी गरेर भए पनि बैंकले पुँजी राख्ने गरेको उनी बताउछन् ।
कर्जा भुक्तानी नहुँदा निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता दिन पनि बैंकहरुलाई समस्या पर्छ । यो कारण गर्दा बैंकहरुले लिलामी गरेर ऋण असुल उपर गर्ने डा. भट्ट बताउँछन् । ‘असुली नभएको ऋण लामो समय खराब सम्पत्तिको रुपमा रहन्छ’ उनले भने, ‘खराब सम्पत्तिको रुपमा राख्नु भन्दा लिलामी गरेर असुल गर्दा बैंकलाई सजिलो हुन्छ ।’
बैंकबाट लिएको ऋण १ महिनासम्म नतिर्दा पनि असल मानिन्छ तर यसका लागि १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकको नाफा घट्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋण नतिर्नेलाई बैंकले सुक्ष्म निगरानी (वाच लिस्ट) राख्ने गरेका छन् । वाच लिस्टमा राखेपछि ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था छ ।
मङ्गलबार २५, कार्तिक २०७७ ०७:३४ मा प्रकाशित
कोभिडको असर : बैंकहरुको ५ खर्ब लगानी जोखिममा !